‘सबैलाई सहरको चिन्ता, मलाई गाउँको’ – Karnalisandesh
‘सबैलाई सहरको चिन्ता, मलाई गाउँको’
प्रकाशित मितिः ७ चैत्र २०७६, शुक्रबार १८:३१ March 20, 2020
काठमाडौँ। अनेरास्ववियूकी नेता भूमिका पोखरेलले कोरोनाबाट नेपालका गाउँवस्ति पनि तनावग्रस्त हुने सम्भावना रहेको बताएकी छन्।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेशबुक मार्फत सरकारले सहर बजारको मात्रै चिन्ता गरिरहेको भन्दै गाउँको सम्भावित खतरालाई नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप छ।
उनले लेखेकी छन्, ‘काठमाडौँका गल्ली गल्लिमा नीजी मेडिकल छन्। चौक चौकमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु छन्। र त यति कठिन ठानिएको छ। तर, दुरदराजका गाउँ जहाँ सिटामोलको त अभाव हुन्छ। अर्को तर्फ जहाँबाट अस्पताल पुग्नका लागि चार पाँचघण्टा हिडेपछि बल्लतल्ल रोडमा पुगिन्छ। त्यसपछि पनि एम्बुलेन्सको त कुरै नगरौ गाडि पनि पाउने हो कि होइन थाहा हुन्न।’
उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘जसो तसो अस्पताल पनि पुगियो रे! अस्पतालको क्षमता र एक÷दुईजना चिकित्सकको भरमा अस्पताल चलिरहेका छन्। अस्पतालका कर्मचारीहरुलाई समेत कोरोनाबाट बच्ने साधानहरु छैनन्। गाउँका मानिसहरुले कसरी पाउन ?’
विकट क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले आफ्नो ज्यान खतरामा राखेर सेवा गरिरहेको पोखरेलको दाबी छ। भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढेको र त्यहाँ रहेका नेपालीहरु खुल्ला सीमाको बाटो भएर नेपाल प्रवेश गर्ने हुँदा त्यसतर्फ सरकारले गम्भीर सचेतना अपनाउनु पर्ने पोखरेलको सुझाव छ।
उनले लेखेकी छन्, ‘चिकित्सक र कर्मचारीहरुले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर अस्पताल कुरिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा बिरामीको सेवा कसरी हुन सक्छ ? विशेषगरि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका ५० प्रतिशतभन्दा बढि मानिसहरु भारतमा छन्। र यो समयमा उनीहरुको आफ्नो जन्मथलो फर्किने क्रम पनि बढ्दो छ।
कति गाउँमा त व्यक्तिगत स्वच्छताको बारेमा पनि खासै चेतना हुँदैन। यस्तो अवस्थामा जति सहरमा कोरोनाको जोखिम छ। गाउँमा पनि त्यो भन्दा कम छैन। त्यसैले सरकारले दुर्गम ठाउँका अस्पतालहरुमा चिकित्सकहरुको दरबन्दी आवश्यकताअनुसार बढाउनु पर्छ। अस्पतालमा चाहिने हरेक किसिमको सामानको ब्यवस्था छिट्टै गर्नुपर्दछ।’